काठमाडौं – सिंहदरबार पश्चिम गेटको ठ्याक्कै अगाडि भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय प्रांगणमा ५ वटा गाडी थन्किएका छन् ।
नम्बर प्लेट हेर्दा नयाँ छ तर गाडी नयाँजस्तो देखिँदैन । किन थन्किएका हुन् ती गाडी ? त्यहाँ पुग्ने अधिकांशको मनमा यस्तो जिज्ञासा आउनु स्वभाविक नै हो ।
महिला आयोगले पदाधिकारीका लागि भनेर खरिद गरेका नयाँ गाडी हुन् ती । सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा झण्डै एक वर्षदेखि थन्किएका छन् ।
घामपानी र धूलोको कारण बाहिरी स्वरूप थोत्रिँदै छ इञ्जिन तथा भित्री पार्टमा समेत खिया लाग्न थालिसकेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीका लागि गाडी खरिद गर्न भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अर्थमन्त्रालयबाट ३ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो ।
कार्यालयले टेण्डर प्रक्रियामार्फत् २ करोड ८५ लाखमा ६ वटा गाडी खरिद गर्‍यो । एउटा गाडी आयोगमा कार्यरत सचिवले चढेका छन् भने बाँकी ५ वटा थन्किएका छन् । गाडी चढ्न आउने पदाधिकारीको प्रतिक्षामा १ वर्ष बित्यो तर सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेन ।
पदाधिकारी नै नआई गाडी खरिद गरेर थोत्रो बनाइएको छ । बजेट पनि स्वीकृत भएको र तत्काल पदाधिकारी आउने सोचेर गाडी खरिद गरिएको आयोगको कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्री बताउँछन्।
ती गाडीले एक वर्षदेखि कार्यालयको प्रांगणमा घामपानी र धुलो खाइरहेका छन् । महिला आयोग नयाँ किनिएका गाडीहरूको संरक्षणमा समेत उदासीन देखिएको छ । साधारण ओतमा समेत राखिएको छैन ।
गाडीको संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नमा सूचना अधिकारी क्षेत्री ठाउँको अभावलाई कारण देखाउँछन् । ‘आयोगको आफ्नै कार्यालय भवन समेत छैन । हामीले राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भवन प्रयोग गरिरहेका छौं ।
गाडीलाई समय–समयमा सञ्चालन गर्ने काम त भएको छ तर हामीले ओत लाग्ने स्थायी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौ,’ सूचना अधिकारी क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।
महिला आयोगको जस्तै अवस्था राष्ट्रिय दलित आयोगको पनि छ । ललितपुरको जावलाखेलस्थित दलित आयोगको कार्यालय प्राङ्गणमा नयाँ गाडीहरूलाई धुलाम्मे बनाएर राखिएको छ ।
संरक्षणको अभाव र लामो समयदेखि नचल्दा गाडीहरू थोत्रिसकेका छन् । न त प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको नियुक्ति भएको छ, न उनीहरूका लागि भनेर खरिद गरिएका गाडीहरूको संरक्षण नै ।
दलित आयोगमा थोत्रिएका गाडीहरू पनि गत वर्ष टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको हो । एक अध्यक्ष र ४ सदस्य गरी ५ पदाधिकारी र एक सचिवका लागि भनेर खरिद गरिएका ६ वटा गाडीमध्ये ५ वटा थन्किएर बसेका छन् ।
कामविहीन आयोग !
दलित आयोगमा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर अहिले २० जना मात्रै कार्यरत छन् । कार्यसम्पादन पनि सुस्त छ ।
गत आवमा दलित आयोगको कार्यालयले जम्मा ४/५ वटा मात्र काम सम्पादन गर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा पनि आयोगको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन समेत बनाएको छैन ।
आयोगको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव मनिता श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालयले साधारण खर्चका लागि न्यून बजेट मात्र उपलब्ध गराएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताउँछिन् । विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम अर्थ मन्त्रालयले होल्ड गरेर राखेको उनको गुनासो छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा नयाँ गाडी त थोत्रिँदैछन् नै २० जना कर्मचारीलाई कामै नदिई भरणपोषण गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
महिला आयोग र दलित आयोग त उदाहरण मात्र हुन्, अधिकांश आयोगहरूको अवस्था यस्तै छ ।